अर्बपतिबाट सिक्नैपर्ने बानी « Npnews
May 24, 2017 Wed
अर्बपतिबाट सिक्नैपर्ने बानी
प्रकाशित मिति: December 24, 2016
पुस ९, २०७३- हामीमध्ये धेरैको चाहना ‘मनग्ये धनआर्जन कसरी गर्ने र जीवन सफल कसरी बनाउने’ भन्ने नै हुन्छ । संसारका अधिकांश मानिसको पहिलो चाहना के हो भन्नेबारे गरिएको अध्ययनले पनि यसैलाई पुष्टि गरेको छ । तर, चाहना राखेर मात्रै हुँदो रहेन छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने ‘टुल्स’ को पहिचान गर्न आवश्यक पर्छ । विश्वमा जतिजना सफल बनेका छन्, अर्बपति भएका छन् तिनीहरूका सेक्रेट कुराहरू मानिसका लागि मार्गदर्शक हुन सक्छन् ।
सफल व्यक्तिहरूको जीवनशैली अरूको भन्दा फरक भएरै उनीहरू सफलताको शिखरमा पुगेका हुन् । धन आर्जन मात्रै ठूलो कुरो होइन । यी कुराको साक्षात प्रमाण विश्वका अर्बपतिहरूको जीवनशैली पनि हो । जीवनमा संघर्ष त छँदै छ तर त्यसको अलावा अन्य विषयहरू पनि जरुरी पर्छ । नियमित मेडिटेसन गर्ने, चाँडै उठ्ने, दैनिक रुटिनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने, मितव्ययी बन्ने, पारिवारिक पृष्ठभूमि नबिर्सने, परोपकारी काम गर्ने र पुस्तकहरू पढ्नेलगायतका बानीले मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ । यी र यस्तै कार्यलाई नियमति बनाएर विश्वमा धेरै मानिस सफल भएका छन् ।
वैज्ञानिकहरू भन्छन्, ‘मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यका लागि ध्यान गर्नु (मेडिटेसन) ले धेरै फाइदा गर्छ । मेडिटेसनले स्मरणशक्ति मात्रै बढाउँदैन, रोगविरुद्ध लड्ने क्षमता पनि बढ्छ ।’ वैज्ञानिकहरूको यो भनाइलाई धेरै जना अर्बपतिले अनुसरण गर्दै आएका छन् । तीमध्येका एक हुन्, ब्रिजवाटर एसोसिएट्सका संस्थापक रे डालियो । उनले ‘हफिङगटन पोस्ट’ सँगको एक अन्तर्वार्तामा मेडिटेसनलाई जीवनको अभिन्न अंग भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘मेरो जीवनमा अन्य कुनै वस्तुभन्दा पनि मेडिटेसनको महत्त्व बढी छ । मेरो जीवन सफल बनाउन ध्यानको अहम् भूमिका रहयो ।’
रे डालिओको कुल सम्पत्ति १६ अर्ब अमेरिकी डलर छ । आफ्नै व्यवसाय र उद्यमबाट उनी धनाढ्य बनेका हुन् । अमेरिकी अखबार ‘फोब्र्स’ को सूचीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ जनालाई उछिन्दै यो वर्ष उनी २५ औं स्थानमा उक्ले । मेडिटेसन गर्नेमा डालिओ एक्ला भने होइनन् । अन्य अर्बपतिहरू पनि उनीजस्तै नियमित ध्यान गर्छन् । टीटर र स्क्वायर कम्पनीका सीईओ ज्याक डोर्सी, मिडिया मोगल ओप्राह विन्फ्रे पनि दैनिक र नियमित मेडिटेसन गर्छन् । अघिल्लो सेप्टेम्बरमा डोर्सीको कुल सम्पत्ति २ दशमलव २ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको थियो । ४० वर्षीय उनी सेल्फमेड अर्बपति हुन् । यो वर्षको फोब्र्सको सूचीमा उनी १६९४ औं, अमेरिकामा ५०९ औं स्थानमा छन् । उनी अविवाहित छन् तर नियमित ध्यानयोग गर्छन् ।
यस्तै अर्बपति र सफल व्यक्तिहरूको रुचि परोपकारी काममा पनि उत्तिकै रहेको पाइन्छ । धेरै धनाढ्यहरू आफ्नो धनबाट विश्वलाई कसरी प्रभावमा पार्ने र आफू कसरी चर्चित बन्ने भन्ने ध्याउन्नमा रहेका भेटिन्छन् । तीमध्ये कोही परोपकारी कामबाटै आफूलाई अब्बल बनाउन खोज्छन्, अन्य केही व्यापार अथवा विभिन्न प्रकारका महँगा कारहरू खरिद गरी आफूलाई चर्चामा ल्याउने गर्छन् ।
अझ धनाढ्यहरू विलासिलता जीवनयापनलाई नै आफ्नो ध्येय बनाएको पनि पाइन्छ । तर, ती धनाढ्यहरूमध्ये परोपकारी काममा लागेकाहरू बढी चर्चित हुने गरेका छन् । तिनै अर्बपतिहरूमा ब्लुम्बर्ग मिडियाका संस्थापक तथा सीईओ माइकल ब्लुमबर्ग भने मानव जातिको सेवा, परोपकारमा आफ्नो जीवनको धेरै रकम खर्चेका छन् । उनले आफू अर्बपति बनेयता ३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति परोकारी काममा लगाइसकेका छन् । उनको कुल सम्पत्ति ४५ अर्ब अमेरिकी डलर छ । यो काममा वारेन बफेट, बिल गेट्स र मेलिन्डा गेट्सको पनि उस्तै चर्चा छ । यी सबै विश्वका कहलिएका अर्बपति हुन् । यिनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिका आधाभन्दा बढी हिस्सा मानव सेवामा लगाएका छन् । केहीले त आफ्नो सम्पत्तिको ९९ प्रतिसम्म यही सेवामा खर्चेका पनि छन् । अर्थात परोपकार गर्नुलाई आफ्नो लक्ष्य नै बनाएर अघि बढेका पनि छन् ।
सफल हुन चाहनेले बिर्सनै नहुने कार्य हो चाँडै उठ्नु । धनाढ्य बन्नेहरूबाट सबैले सिक्नै पर्ने कुरो हो, एकाबिहानै ओछ्यान छाडेर आफ्नो काममा जानु । एउटा भनाइ छ, ‘बिहान चाँडै उड्ने चराले आफ्नो खाना सजिलै पाउँछ ।’ अरूभन्दा चाँडै उठेर काममा जानेहरूमध्ये ज्याक डोर्सी पनि एक हुन् । उनी बिहान ५ बजे उठ्छन्, नियमित ध्यान गरेपछि काममा दौडिन्छन् । यसैगरी भर्जिन ग्रुपका संस्थापक रिचार्ड ब्रान्सन बिहान ५ बजेर ४५ मिनेटमा सधैं उठ्छन् । उनीसँग धनको कमी नभए पनि वर्षौंदेखि यो रुटिनलाई आफ्नो जीवनमा अपनाउँदै आएका छन् । सूर्योदयभन्दा अघि उठेर सफल भएकाहरूमा ब्रान्सन र डोर्सी मात्रै होइनन् । लगातार पाँच वर्षसम्म विश्वका धनाढ्यहरूको दिनचर्याको अध्ययन गरी पुस्तक लेखेका थोमस सी कोर्लीका अनुसार करिब ५० प्रतिशत अर्बपतिहरू आफ्नो काम सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन घण्टाअघि उठ्ने गरेका छन् ।
धनाढ्य बन्ने चाहना राख्नेहरूले आफ्नो दैनिक ‘रुटिन’ को पालना कडाइका साथ गर्न सक्नुपर्छ । विश्वका अति सफल व्यक्तिहरूले आफ्नो दैनिक रुटिनलाई बिगारेको बिरलै पाइन्छ । जुनसुकै परिस्थितिमा पनि यसलाई पालना गर्न सधैं तिनीहरू प्रयासरत हुन्छन् । आफ्नो दिनचर्यालाई कडा रूपमा पालना गर्नेहरूमा कपालका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको उत्पादन गर्ने कम्पनी प्याट्रोन टेक्ला र पउल मिचेलका संस्थापक जोन पउल डिजोरिया अग्रस्थानमा छन् ।
उनी हरेक दिन पाँच मिनेटजति शान्त बसेर आफूले गरेको कामहरूको आत्मसमीक्षा र मूल्यांकन गर्ने गर्छन् । ‘म कहाँ छु, कस्तो घरमा बस्छु, कुन होटेलको कस्तो रुममा बस्छु, त्यसले मेरो जीवनमा कुनै मार्थ राख्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यी सबै मेरा लागि दोस्रो प्राथमिकताका विषय हुन् ।’ उनी थप्छन्, ‘म बिहानै उठ्छु र ओछ्यानमा कम्तीमा पाँच मिनेट बस्छु । आफ्नो आत्मसमीक्षा गरेर मात्रै काममा जान्छु, यो नै मेरो सफलताको रहस्य हो ।’
सफल व्यक्तिहरूमध्ये धेरैले अंगीकार गरेको अर्को विषय हो, आफ्नो धरातलीय पृष्ठभूमि नबिर्सनु । विश्वका धेरै यस्ता अर्बपति पनि छन्, जसले आफूसँग भएको धनलाई प्रदर्शनको सामग्री बनाउन चाहँदैनन् । यो श्रेणीमा पर्नेहरूले आफ्नो जीवन अत्यन्तै मितव्ययी शैलीमा बिताउने गरेका छन् । तिनीहरू भड्किलोभन्दा मितव्ययी जीवन यापन गर्न रुचाउँछन् । ‘इन्टरप्रेनियर’ मा मुर्रेर न्युजल्यान्ड्स लेख्छन्, ‘वालमार्टका संस्थापक स्याम वाल्टनले सन् १९७९ मा फोर्ड एफ १५० पिकअप ट्रक चलाएर लोकप्रिय बनेका थिए ।
मार्क जुकरबर्गसँग अझै पनि ३० हजार डलर पर्ने अकुरा टीएक्स गाडी छ । विलगेट्स वर्षौंसम्म कमर्सियल विमानमा यात्रा गर्थे ।’ विश्वका चर्चित अर्बपति वारेन बफेट जो अझै पनि ३१ हजार ५ सय मूल्य पर्ने घरमा बस्छन् र स्मार्टफोनको साटो पुरानो ‘फ्लीप फोन’ प्रयोग गर्न रुचाउँछन् । यी अर्बपतिहरूबाट विलासी जीवनयापन गर्नेहरूले केही सिक्नैपर्छ । नयाँ ग्याजेट बजारमा आउने बित्तिकै खरिद गर्ने लत बसेकाहरूले आफूमा सुधार गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै धनाढ्य भए पनि आफ्नो लक्ष्यमा सधैं अड्डी कसेकाहरू नै अग्रपंक्तिमा हुन्छन् । सन् २००५ मा स्ट्यानफर्ड विश्वविद्यालयका ग्य्राजुएट्सलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा एपलका सहसंस्थापक स्टेभ जब्सले भनेका थिए, ‘तपाईलाई जे मन पर्छ त्यो पाउन सक्नुहुन्छ । अर्थात आफूले चाहेको कुरा जीवनमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि तपाईले महान् कार्य गर्नैपर्छ, संघर्षको पथमा अग्रसर हुनैपर्छ । एकाग्रचित्त भएर अघि बढे यो संसारमा नपाइने कुनै वस्तु छैन । ’आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न लगनशीलताले जो कोहीलाई पनि सहयोग पुग्छ ।
जब्सले त्यसै गरे र अर्बपति बने । सफल पनि भए । तर, उनी यसमा एक्लो भने होइनन् । अर्का लेखक नेपोलियन हिल्सले २० औं शताब्दीमा ५ सय धनाढ्यहरूको अध्ययन गरी तयार पारेको पुस्तक ‘थिङ एन्ड ग्रो रिच’ मा लेखेकेका छन्, ‘आफूलाई मन नपरेको कुराको पछि दौडेर कसैले पनि जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्तैन । आफ्नो रुचि भएको विषयलाई लक्ष्य बनाएर अघि बढे सफल हुन बेर लाग्दैन ।’
धनाढ्य र सफल भएका व्यक्तिहरूको रुचि पुस्तक अध्ययन गर्नु पनि रहेको पाइन्छ । विश्वका अधिकांश सफल व्यक्तिहरू किताबका किरा हुने गरेको भेटिएका छन् । तिनीहरूले पढ्नुलाई आफ्नो रुचिको विषय बनाएका छन् । अनलाइन खबर ‘बिजनेस इन्साइडर’ का साना लेबोविज लेख्छन्, ‘लगानी क्षेत्रमा इतिहास बनाएका अर्थात ‘इन्भेस्टिङ लेजेन्ड’ बारेन बफेटले आफ्नो दिनचर्याको ८० प्रतिशत समय पढाइमा खर्च गर्छन्, उनी आफ्नो वार्षिक सेयरहोल्डर पत्रमा किताबहरूसमेत समावेश गर्ने गर्छन् ।’ फेसबुकका मार्क जुकरबर्गले हरेक दुई सातामा एउटा पुस्तक पढ्ने गर्छन् । मिडिया मुगल ओप्राह विन्फ्रेले हरेक महिना एउटा पुस्तक पढेर सिद्धाउँछन् ।
‘ओप्राह’ ज बुक क्लब २.०’ मा अनलाइन छलफलमा उनी सहभागी हुन्छन् । यसैगरी टेक अर्बपति इलोन मस्कले ‘तपाईले रकट कसरी बनाउनुहुन्छ’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा भनेका थिए, ‘म नियमित पुस्तकहरू पढ्छु ।’ यहाँ उल्लेखित सफल व्यक्तिहरूसँग सम्पत्तिको कुनै कमी छैन । तर, आफ्नो दिनचर्यालाई नियमित र व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् ।
तल आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस !
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ, १० जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग आज भएको भेटलाई केही सञ्चारमाध्यममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा पछी मधेसी दलका नेताहरुले यस्तो प्रतिक्रिया दिए
काठमाडौं, जेठ १०– मधेशवादी दलका नेताहरुले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा दर्ज भएको धारणा राखेका छन् । मधेशवादी प्रचण्डले राजीनामा दिएपनि देउवा प्रधानमन्त्री नबन्ने !
१० जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले निर्वाचनमा असर गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजिनामा नदिन दबाब दिएपनि अन्ततः प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले दोस्रो चरणको चुनाव अन्योलमा: एमालेको ठहर
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजिनामाले दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन अन्योलमा पारेको प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको ठहर छ। बुधबार बसेको नेकपा एमाले स्थायी देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा एमालेले टक्कर दिने, बालकोटबाट आयो निर्णय
काठमाडौं, १० जेठ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिएसँगै देशमा झन् अन्योल थपिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री भारतमा भएको जातीय विवादमा एकको मृत्यु, कैयौँ घाइते
2016 | npnews.net. Designed by appharu.com